အစ္စရေးနှင့် ပါလက်စတိုင်းနယ်စပ် ဂါဇာအရှေ့ဘက်တွင် ဆန္ဒပြပွဲကို အစ္စရေးတပ်များ အကြမ်းဖက်လူစုခ - Yangon Media Group
အစ္စရေးနှင့် ပါလက်စတိုင်းနယ်စပ် ဂါဇာအရှေ့ဘက်တွင် ဆန္ဒပြပွဲကို အစ္စရေးတပ်များ အကြမ်းဖက်လူစုခ
ဂါဇာ၊ မေ ၅ ၊ ပါလက်စတိုင်းဆန္ဒပြသူများ နှင့် နယ်စပ်အစ္စရေးတပ်သားများ အကြား မေ ၄ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက ဝတ်ပြုချိန်မှစတင်ကာ ဂါဇာကမ်း မြောင်ဒေသ အရှေ့ပိုင်းတွင် တစ် နေ့လုံး ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ပဋိပက္ခ ပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပွားနေသော ကြောင့် ပါလက်စတိုင်းလူမျိုး ၁ဝဝဝ ကျော် ဒဏ်ရာများရရှိသွားခဲ့ကြ သည်ဟု မေ ၅ ရက်က ဆေးရုံဝန် ထမ်းများ၏ သတင်းများအရ သိ ရှိရသည်။
အစ္စရေးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များ က သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်လူစုခွဲခဲ့ သောကြောင့် ပါလက်စတိုင်းဆန္ဒ ပြသူများမှာ ရော်ဘာကျည်ဆန် များ ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခြင်းများ၊ မျက်ရည်ယိုဗုံး ဓာတ်ငွေ့ထိခိုက် မှုများဖြင့် ဆေးရုံသို့ရောက်ရှိလာ ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပါလက်စတိုင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ အာရှရတ်ဖ်အယ်လ် ကွီဒရာက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက် သည်။
မတ် ၃ဝ ရက်က စတင်ခဲ့ သော အစ္စရေးဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒ ပြပွဲသည် ခြောက်ရက်မြောက်နေ့ အတွင်းသို့ ချင်းနင်းရောက်ရှိလာ ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ သောကြာနေ့ ဘာ သာရေးဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲအပြီး တွင် ဆန္ဒပြသူများသည် ဂါဇာကမ်း မြောင်ဒေသနယ်စပ်အနီး ငါးနေ ရာသို့သွားရောက်ကာ တာယာအ ဟောင်းများ မီးရှို့ခြင်း၊ နယ်စပ်အ စောင့်စစ်သားများအား ခဲများဖြင့် ပစ်ပေါက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရာမှ နှစ် ဖက်ပဋိပက္ခ ကြီးထွားလာခြင်းဖြစ် သည်။
အစ္စရေးစစ်သားများက မျက်ရည်ယိုဗုံး တစ်ဒါဇင်ခန့် ပစ် ဖောက်ခြင်း၊ ရော်ဘာကျည်သုံး၍ ပစ်ခတ်ကာ ဆန္ဒပြသူများအား အကြမ်းဖက်လူစုခွဲခဲ့ကြခြင်းဖြစ် သည်ဟု ဆန္ဒပြသူတစ်ဦးဖြစ်သူ ဆာလာအဗ္ဗဒူလ်အားတီက ဆင် ဟွာသတင်းထောက်သို့ ပြောဆို လိုက်သည်။
ကွန်ပျူတာ၊ ဖုန်းနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာနည်းပညာပြပွဲနှင့် ဈေးရောင်းပွဲတော် မန္တလေးမြို့ေ??
ဆီးရီးယားနိုင်ငံ ဒိုမာမြို့ ဓာတုလက်နက်စစ်ဆေးရေးမှူးများ မြေပြင်စစ်ဆေးမှုပြီးဆုံး
သရက်မြို့ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန် အမှုဖွင့်
ချက်သမ္မတနိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကုဋေကြွယ်သူဌေးကြီး အန်ဒရေဘာဘီစ် အနိုင်ရရှိ
စက်သုံးဆီ ဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှု ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် ဓာတ်ဆီထက် ဈေးနှုန်းသက်သာသော LPG ကို တက္ကစီအ?
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ ရေလှောင် တမံများ၌ မိုးရေပိုမို သိုလှောင်နိုင်ခဲ့သဖြင့် ယခင်??
မုဒိမ်းမှု ကျူးလွန်ခြင်းကို ရဲတပ်ဖွဲ့ အရေးမယူပါက လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်သို့ တိုင်ကြားနို??